Misarika ny Saina Manoloana Ny Manjò Ireo Ankizy sy Tovovavy Miasa Ao Myanmar Ny Mpanakanto · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Septambra 2016 5:26 GMT
Vakio amin'ny teny عربي, বাংলা, русский, Ελληνικά, 日本語, Español, 繁體中文, 简体中文, English
Namokatra sarimiaina maromaro manasongadina ny fepetra ratsy iainan'ny ankamaroan'ny ankizy sy ny tovovavy ao amin'ny fireneny ilay mpanakanto ao Myanmar, Nyan Kyal Say .
Mitondra ny lohateny hoe “Te Ho Any An-tsekoly Aho” ny iray amin'ireo sarimiaina ireo, milaza ny tantaran'ny tovolahy sy tovovavy mpiray tampo izay voantohintohin'ireo vato misakana isan-karazany tahaka ny tsy fitovian'ny lahy sy ny vavy, ny fahantrana, ny ady, ny fampijaliana ankizy sy ny fanondranana olona ny nofin'izy ireo handeha any an-tsekoly.
Nahazo ny loka ho an'ny sarimiaina tsara indrindra tamin'ny Fetiben'ny Filma Iraisampirenena momba ny Fahamendrehan'ny Olombelona sy ny Zon'olombelona 2015 izany. Tamin'ny volana lasa teo, nampiroborobo ny lahatsary ho anisan'ny fanentanana hanamafisana ny fiarovana ny ankizy ao Myanmar ny Birao Iraisampirenena Momba ny Asa ao Azia-Pasifika .
Araka ny fikarohana sasany, iray amin'ny ankizy 10 ao Myanmar no miasa, ary antsasany mahery amin'izy ireo no manao asa mampidi-doza. Efa ho ny antsasaky ny ankizy no tsy nahavita ny sekoly fanabeazana fototra.
Mitondra ny lohateny hoe ‘Ny Fiainako, Tsy Iriako’ ny sarimiaina iray hafa notontosain'i Nyan Kyal Say izay mampiseho ny zava-niainan'ireo tovovavy marobe ao Myanmar rehefa miezaka mandresy ireo olana isan-karazany atrehiny eo amin'ny fiainana toy ny fanararaotana ara-nofo, ny fanavakavahana, sy ny fanondranana an-tsokosoko izy ireo. Jereo ny sombiny amin'ny lahatsary eto ambany:
Matoky izy fa hanohy handray anjara lehibe ao amin'ny firenena ireo mpanakanton’ny [mg] sarimimaina tahaka azy.